Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 61aad | Jowhar Somali News Leader
Home LOVE STORY Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 61aad
Qadar habeenkii xigay ayuu isaga oo aan la filaneynin tagay xaafadii Samiira oo markii ay aragtay ku tiri.
Qadar Maasha Allah walaahi kuma filaneynin
Waxaan diidanaa in aad wax badan iga fikir si aad u aragto in aan caafimaad qabo Ayaan kugu imid.
Maasha Allah Soo dhaaf
Aabe iyo Hooyo Meeyey
Malaha waa ay soo dhow yihiin saacadaan
Oo halkee tageen caawa
Eedo oo xanuunsan ayay aadeen
Illaahay ha caafiyo
Haye Qabow mise Kuleyl
Kama uusan fogeynee tarmuus miiska saarnaa ayay koob shah kaga shubtay markaasey ayay ku tiri.
Waa illaah mahadiis ladnaan iyo degenaanba waa ay kaa muuqdaan maxaa soo kordhay
Alxamdullaahi sidii xalay sow kama wanaagsani
Aad oo weyn xalay aad Ayaan kugu baqay walaahi
Waan ogahay in naftaada aad lamaan iga dhigtay dareen xoogan oo aan cidina qiyaasi Karin aad ii qabto habeenkii xalay ahaa waan ka gudubnay cabsi ma jirto.
Adiga ka waran naftaada halkeen ka joogaa dareen xagaagada ma ii jiraa
Xalay ka hor waxba iskama dareemin
Dareen sidee ah
Qadar inta uusan ka jwaabin ayaa waxaa soo gashay Yusra oo inta qeylisay ku tiri
Qadarow waan kuu xanaaqsanahay
Maxaa kaa xanaajiyey bal ii sheeg
Ogow dumashigeyna ma tihid
Qadar markii uu kalmadaas yiri ayay Yusra iyo Samiira is fiiriyeen balse inta uusan midkoodna hadlin ayaa uu Yusra labada garbiood ka qabtay oo uu miiskii hortiisa yaalay ku fadhiisiyey uu yiri.
Aniga waxaan ogahay in aad tahay gabadh aad u caqli badan ee mid iga jawaab gurigaan yaa kula nool oo kula degan.
Hoooyo iyo Aabe
Haye Samiira Markii ay kuu yeerto maxaad tiraahdaa
Abaayo Ayaan dhahaa
Qof aad aboowe dhahdo guriga ma joogaa
Gartay haddii aan walaashaa Samiira aan guursado sow Aboowe kuuma ihi ileyn iyadaba waa abaayee aniga maxaad igu yeeri laheyd markaas.
Samiira oo hadalkiisa la yaabaneyd oo markan ujeedka fahamtay ayaa Yusra ku tiri
Haye Yusra jawaab hee haddii aan aniga Abaayo ahay isagana sow Aboowe maaha
Haa waa intaas inta aan kaa rabo oo aad meesha ugu saarto in aad Dumaashi I dhahdo ma fahamtay hadda aboowe Ayaan kuu ahay.
Laakiin Jiiro dheer ayaa I soo marsiyey meel ka fudud oo aad igu dareensiiso miyaad weyday
Mida ugu macquulsan Ayaan u fahmay in ay tani tahay haye ma isku raacnay
Haa waan isku raacnay
Ii sheeg maxaad iga xanaaqday
Cashadii xalay oo aadan aniga I casuumin waan kaa xanaaqay runtii laakiin xanuunkaaga Ayaan wax walba ku ilaaway.
Ka waran haddii aan Qado iyo Casho kugu casuumo
Yusra inta ay qososhay ayay tiri
Maalin Jimco oo aadan iskuul laheyn Ayaan labo gelin ku casuumayaa waliba adiga ayaa dalbanayo meesha aan casuumada ku qaadaneyno.
Laakiin masuuliyad weyn ayaad I siineysaa
Waliba cida kale ee nagu wehlineyso casuumada adiga ayaa u madax banana oo casuumayo.
Yusra inta ay qosohahay ayay mar kale ku tiri
Ka waran Haddii Samiira aanan casuumin
Cidaad casuunto oo kaliya ayaa na raaceyso
Maya walaashey waa ay na raaceysaa xanaaqii aan kuu qabayna waan ka soo laabtay waana mahadsan tahay.
Adaa Mudan walaashey
Yusra iyada oo faraxsan ayay qolka ka baxday Samiira oo weli indhaha ku heyso Qadar ayaa uu kor u soo fiiriyey misana waxaa indhaha ka buuxsaneyso Samiira markii uu dareemay in isaga ay ku dheygagtay ayaa uu ku yiri.
Haye Samiira ma ila joogtaa mise waa baxday
Ma ogtahay Macaane markii aad iga dheer tahay in aan kuu dhibtoodo markaad ii dhow tahayna kaama dhergo Qadarow jaceylkii waa igu labo jibaartay sow maaha in aan qalbiga kaa buuxsado inta aad ila joogto.
Waan ogahay in qalbi ii daacad ah uu igu sidkan yahay waxaana hubaa in ay imaan doonto maalin dareenka jaceylka aanan ku kala liidan.
Inshah allah Illaahay maalintaa ha igu simo
In cabaar ah ayaa la wada sheekeeyey mar kale ayaa uu Qadar ugu mahad celiyey Samiira sida ay qalbigiisa u dejiysay waxa uuna u sheegay in noloshiisa ay wax badan ka badashay midba midka kale ayaa uu Qeyr u rajeeyey sidii ayaa uuna ku baxay isaga oo ku sii adkeeyey inuu Aabe iyo Hooyo salaam ka gaarsiiso.
Previous articleSacudiga oo shaaciyay dadkii ka dambeeyay dilkii Khashuqi
Next articleBooliiska Uganda oo bilaabay in ayilaaliyaan xarumaha ay ka shaqeeyaan dadka Shiineeska